Hadii si shil ah faraantiga kaaga soobaxo maxaad sameyneysaa? Isticmaal salbatiibo ilaa 7 maalmood weydiisana kahortag deg deg ah hadii ay galmo dhacday, xitaa hadii ay tahay xiliga nasiinada. Bikrada Markey naagtu tahay bikro siilka gudihiisa waxaa laga helaayaa xuub qafiif ah oo furan. Kadib way fududaanee markaad labo tihiin. Si uu waxtar sare u yeesho, salbatiibada waa in markasata uu fal dhacaayo la isticmaalaa iyo markastaba falka ka hor. Bacriminta, waxay la kulmee ukun iyo shahwo,gudaha markaas ukuntii bacrintay waxay aadeysaa minka. Qabo faraantiga gudihiisa, ku riix meesha ugu fog ee siilka gudihiisa. Faraantiga qeybtiisa ee balaaran waa iney joogtaa banaanka siilka afkiisa.
Dufan ayuu leeyahay wuxuu na labada dhinac ku qabaa wareeg faraantiga oo kale. Markey caadada kaa dhamaato xuubkaas wuu fuqaayaa,wuxuuna noqonaayaa caadadii laa kiin hadii uur yimaado xuubkaas wuxuu noqonayaa buul ay uur jiiftu ku jirto. Qeybta hoose ee sooraacdo siilka waxaa loo yaqaanaa minka afkiisa. Waxa laga yaba in ad uu bahan tahay ka hortag ur kama ah. Caadadana dib ayay u dhici doontaa faraantiga 2aad kadib. Biyo raaci faraantiga biyo qaboow ama qandac marnaba ha isticmaalin biyo kulul ee dib ugasho siilka ama iska badal. Inta uu socdo waa wax badalmikara, guud ahaan 21 ilaa 35 maalmood. Meel yar oo duleesho ayaa waxay u ogalaaneysaa inay marto shahwada ama caadada. Hadii aan ku jirno Isbuucii koowaad ood gashatay faraantiga: Si joogto ah u isticmaal faraantiga isticmaalna salbatiibo. Markaad iska soo bixineysid, gadi faraantiga ee si tartiib ah isaga soo jiid. Saad isaga yareeysid sharqanta salbatiibada inta fal galka uu dhacaayo, waxaad salbatiibada dhaxdeeda ku dari kartaa dufan. Taasna waxa lo bahan yahay si deg deg ah in loga hortago — marba sida wax ay yihin ugu dambeen 70 ama ila sacad ka dib markad galmada sameesay bila ka hortag ur waxad eegta ka hortag ur kama ah. Qaabka bikrada naagba naagta kale way kaduwantahay. Bacrimintaasi isku waqti matimaado, waxaa jira xaalad looyaqaano xisaabta laakiin ma ahan xaalad fiican oo looga hortagi karo uurka. Isu taga udhow maalmahaas bacriminta waa maalmaha ugu fiican ee layeesho uurka. Nasiino samee mudo 7 maalmood ah,kadib mid cusub gasho hadana maalin arbaco ah saacaduna tahay 22h. Salbatiiba dumarku ay istic malan oo lo isticmalo inan ur la yeelan wa cinjir an cadiyan dilacin lakin haday noqoto waxa la yaba in ad uu bahato ka hortag ur kama ah. Waxay leeyihiin labo kaalin: Faraantiga ku cesho isticmaalna salbatiibo ilaa 7 maalmood. Kadib way fududaanee markaad labo tihiin. Xagan ka helaya meel iga cawisa ka hor taga ur kama ah Xafiiska qorshaha qoyska Isbitaalka qeybta dhaqtarka deg dega Dhaqtarka qeybta dumarka ama dhaqtaryaasha Saad u dareentid fudeed Kaligaa tabobar samee si aad u fahantid sii loo galinaayo. Qarniyaasha waxay bilaawdaan inta udhaxeyso 11 ilaa 1 5 sano waxayna joog sataa xiliga aay caadada guurto oo ah inta u dhaxeyso 45 ilaa 55 sano. Dhuumaha isku xira minka iyo ugxamaha Waa labo tubo oo yar yar ah 1 0 ilaa 1 5 cm dhirirkeeda lagu qiyaasay. Ka hubso dhaqtarkaaga hadii aad weli kahor tag leedahay Sabab too ah daawooyinkaas waxay wax u dhimaan hortagaas. Hadii aad dareentid, hoos u sii riix ilaa meel dheer. Mindicirka Siilka Waa meel jilicsan dhirirkiisana lagu qiyaasay 7 ilaa 1 0 cm.
Video about siilka:
Siilka I Cuncunaayo Markaa Codkaada Maqlo
Xitaa waa meesha ay caadada kasoo baxdo. Kutuur qashinka ee haku ridin musqusha. Way sameeyn kartaa isboortis extent dabaasha ayadoo gashaneeyso. Markii uu guska galo qabo faraantiga siilka taalo www okcupid com home afkiisa suu u dhaqaaqin. Dardaaran Ilaali taariiqda ay dhaceyso. Ka ilaali nalka, kuleelka iyo wayaalaha dilaacinkaraan. Faraantiga ku cesho isticmaalna salbatiibo ilaa 7 maalmood. Nasiinadu marnaba ma dhaafikarto7 maalmood. Ka hubso siilka hadii siiilka weli kahor tag leedahay Siilka too ah daawooyinkaas waxay siilka u dhimaan hortagaas. Markey caadada kaa dhamaato xuubkaas wuu fuqaayaa,wuxuuna noqonaayaa caadadii laa kiin hadii uur yimaado xuubkaas wuxuu noqonayaa buul ay uur jiiftu ku jirto. Dufan siilkz leeyahay wuxuu na labada dhinac ku qabaa wareeg faraantiga oo sacrament.
5 thoughts on “Siilka”
Qeybta hoose ee sooraacdo siilka waxaa loo yaqaanaa minka afkiisa.
Kimi on Siilka